Roulement chat sex
Ny chat chat roulette dia fotoana iray ahafahana mankafy firaisana ara-nofo virtoaly maimaimpoana amin'ny alàlan'ny roulette chat video. Tsy ho sarotra aminao ny mahita tovovavy na tovolahy hanao firaisana eo alohan'ny fakantsary web ao an-tanànanao. Ny hany ilainao dia ny manondro ny maha-lahy na maha-vavy anao ary tsindrio ny "Start Search". Avy eo ny filokana ara-nofo mihitsy dia hanomboka hanome safidy ny mety ho vady. Ho an'ny lehilahy, ny roulette chat vetaveta dia hanolotra tovovavy maro hifantina zazavavy hanao firaisana ara-nofo, ary ny tovovavy hampisondrotra ny firaisana ara-nofo virtoaly eo amin'izy ireo ary hankafy ity resaka mahafinaritra ity.
Rosiana rosiana: fampiarahana mampiaraka amin'ny Internet
Nalefa tamin'ny Novambra 2009, nipoitra tampoka ny Chatroulette.com - telo volana monja taty aoriana, boky sy gazety roa no nanoratra momba izany: The New York Times sy New York Magazine. Ny tantara notantarain'ny mpanao gazety dia tena nampatsiahy ny fahatanterahan'ny nofinofy amerikanina tena izy, ary noho izany dia raiki-pitia tamin'ny mpamaky tandrefana ary notantarain'ny gazety Rosiana avy hatrany.
Toy izao ny tantara: ny zazalahy mpianatra 17 taona any Andrey Ternovsky, mpianatra zazakely 17 taona, dia namorona tranonkala hifandraisana amin'ireo namany. Ny votoatin'ny hevitra dia ny tsy hisafidianana mpandinika hevitra, satria atao amin'ny karazana fifandraisana fantatsika izany, fa ny "sendra" azy tsy nahy - araka ny hevitry ny mpamorona ny tetikasa, mahafinaritra kokoa. Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa nalaza ilay tranonkala, izay ampiasain'ny vondron'olona vitsivitsy fotsiny. Ny vava dia niasa tsara noho ny doka rehetra. Ny tena mahaliana ary somary hafahafa ihany: ilay tetikasa dia nahazo ny lazany voalohany lavitra ny toerana nanombohany - tsy tany Russia, fa tany amin'ireo firenena miteny anglisy. Ao amin'ny faritry ny CIS, ny loharanom-pahalalana dia tsy tafiditra tamin'ny sehatry ny fahitan'ny mpanatrika marobe hatramin'ny fotoana nanoratan'ny haino aman-jery tandrefana momba izany.
Noho izany, amin'ny fanoratana ny anaran'ny domain malaza ankehitriny ao amin'ny bara adiresy, ny mpampiasa dia entina amin'ny pejy iray misy interface tsotra be. Amin'ny ambaratonga fotsy fotsy, misy varavarankely roa, izay samy hanana sary voaforona avy amin'ny fakan-tsary. Eo ankavia no misy ny mpiresaka aminao, eo ankavanana ianao. Mazava ho azy, raha te hiasa ny serivisy dia mila manana mikrô ianao, fakan-tsary ary fifandraisana Internet milamina.
Amin'ny fipihana ny bokotra "Lalao Vaovao" dia ho hitanao ny mpiara-miasa aminao ary na hiresaka aminy kely, na tsindrio ny "Manaraka" dia hahita olona tsara kokoa ianao. Na izany aza, na dia faly ianao ary te hiresaka momba izany sy izany, dia mety hijanona ny resaka satria ilay olona "amin'ny lafiny ilan'ny Internet" dia manan-jo misafidy ihany koa.
Ny fanehoan-kevitra amin'ny serivisy tsotra toy izany, raha tsy izany dia lavitra be.
Rosiana haino aman-jery rosiana marobe sy mpamaham-bolongana tsirairay no nitsikera ny Cahtroulette.com ho "toerana fivarotam-bahoaka." Tsy fitsarana tsy mitombina io. Zahao fotsiny ny pikantsary etsy ambony mba hahatsapanao fa tsy ny tarehy falifaly sy falifaly ihany no azonao atao, fa koa zavatra tsy mahazatra. Ary tsara ihany raha akanjo karnavaly na kilalao volomparasy malefaka. Ny zava-misy dia ireo mpitsidika tsy tompon'andraikitra amin'ny tranonkala, mampiasa ny anarany tsy fantatra anarana, matetika dia manitsakitsaka ireo fitsipika fototra voasoratra ao amin'ny pejy lehibe: "16+ sy No Nudity".
Ary "any ivelany", ny mifanohitra amin'izay, "mihinana sy midera". Araka ny fandalinana ny fifamoivoizana an-tranonkala natolotry ny loharanom-pahalalana Techcrunch, 47% ny mpampiasa dia Amerikanina, arahin'ny frantsay miaraka amin'ny 15%, ary ny kanadiana amin'ny toerana fahatelo (latsaky ny 10%). Ary ity, amin'ny ankapobeny, dia azo hazavaina mora foana - ny solontenan'ireo firenena ireo dia nanao resadresaka mora foana tamin'ny mpiray dia aminy tao anaty fiaramanidina, mpifanila vodirindrina amin'ny trano fisakafoanana ary amin'ny ankapobeny dia misokatra amin'ny olom-pantatra sy resaka tsy mahazatra - tsy toy ireo mpiray tanindrazana amintsika.
Ny isan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala dia efa mihoatra ny efatra tapitrisa isam-bolana, ary ny fifamoivoizana isan'andro dia refesina ana hetsiny. Manombatombana firy ny isan'ny olona an-tserasera isaky ny segondra, dia sarotra be ny mahita olona malaza, olona izay efa ela ianao no te hifandray. Fa angamba. Fantatry ny olo-malaza maro fa mitsidika ilay tranokala izy ireo indraindray ary mandany fotoana ampy any mihitsy aza.
Na izany aza, indraindray ny mifanohitra amin'izay no mitranga: ny olona sasany tsy fantatra taloha dia lasa mahazo laza malaza manerantany. Toy ny, ohatra, ilay mpanao fanatsarana mozika Merton, izay nahita mpihaino feno fankasitrahana an'arivony maro tamin'ny haben'ny tambajotra.
Tsy toy ny Chatroulette, izay kendrena amin'ny mpampiasa vahiny, ny tetikasa davaipogovorim.ru dia hampiroborobo irery ao amin'ny Runet. Tsy hilazalazantsika ny fiasan'izy ireo, satria mamerina tanteraka ilay serivisy efa voalaza izy io, saingy mariho fa nanampy an-tsipiriany iray tena lehibe ny developer: fampiharana manokana ho an'ny VKontakte, izay hahafahanao manao resaka nefa tsy miala amin'ny "tranonao".
Ny fihenan'ny loharano sy ny fampiharana (ary miasa miaraka izy ireo) dia ny isan'ny mpampiasa vitsy. Nandritra ny fitsapana dia efa tamin'ny tsindry fahadimy na fahenina aho no te hiantsoantso hoe: "Bah! Tarehy mahazatra rehetra!"
Vao tsy ela akory izay, araka ny tsaroan'ny mpamaky anay, ny iray amin'ireo motera fikarohana lehibe indrindra sy vavahady misy multifunctional - Mail.Ru - dia nanokatra ny analogie an'ilay chat video malaza. Mahaliana fa raha tsy manamarina ny boaty "Mitadiava fakan-tsary amin'ny fakan-tsary" ihany no hitadiavana azy, tsy ho an'ireo izay mampiasa ny serivisy ihany no hokarohina, fa ny mpampiasa Mail.Ru (izay misy azy rehetra). an-tapitrisany maro), fa Midika izany fa ho azo atao ny mijery sary avatar tsy mihetsika mandritra ny fotoana maharitra. Raha tsy izany dia tsy ho hitanao ny fahasamihafana eo amin'ny fiasa.
Ity chat random ity dia manolotra safidy roa hisafidianana: lahatsoratra sy video. Miasa haingana ny tranokala, betsaka ny mpampiasa an-tserasera. Ankoatry ny fisian'ny fifandraisana an-tsoratra dia tsy nisy fahasamihafana hafa avy amin'ny Chatroulette.
Flytok.ru dia endrika sarotra sy maro loko amin'ny resaka video mitovy. Rehefa miditra amin'ny tranokala ianao dia mahita endrika roa avy hatrany - ny iray ho fidirana tsotra, ny iray ho fisoratana anarana. Na izany aza, tamin'ny fotoanan'ny fitsapana dia tsy te hiasa amin'ny fomba rehetra ny fisoratana anarana, toy izany koa ny antsasaky ny rohy interface. Noho izany dia tsy maintsy nandinika ilay kinova "tsotra" fotsiny izahay momba ny serivisy ary nifantoka tamin'ny hevitry ny mpiara-miasa.
Ny zavatra voalohany manintona ny masonao: ny loharano dia tsy tsotra araka ny fahitana azy. Fandraisana tsy dia mazava loatra miaraka amin'ny sary mihetsika, ilaina ny fisoratana anarana. Tsy ny olon-tsy fantatra ihany no mivory eto, te-hifanakalo teny vitsivitsy, fa ny olona izay tena liana amin'ny serasera. Azonao atao ny mameno ny mombamomba anao, mahazo namana, mijery fampielezam-peo, rakikira sary, mamaky ary mitoraka bilaogy. Ny isan'ny mpampiasa tranonkala dia ambany noho ny Chatroulette, saingy indraindray mety hihoatra ny serivisy Rosiana hafa izy io. Ity serivisy ity dia manakaiky kokoa ny tambajotra sosialy noho ny prototype.
Toy izany koa no azo lazaina momba ny TinyChat Next - miaraka amin'ny fiheverana fa loharanon-karena avy any ivelany izy io, ary ny vondrom-piarahamonina, ary koa ny mpampiasa any, dia vahiny indrindra - resaka video ara-tsosialy ity. Tsy mandritra ny iray minitra no tonga eto amin'ity tranonkala ity ny olona, ​​fa amin'ny fifandraisana feno. Mandrosoa, misafidy vondrom-piarahamonina iray ary manomboka miresaka amin'ny lohahevitra. Raha tianao dia azonao atao ny misoratra anarana ary mamorona ny fiarahamoninao manokana ary miandry ny hafa hanatevin-daharana anao. Azonao atao tsy misy fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny kaontinao Facebook na Twitter.
Rosiana chat video - serivisy mampiaraka amin'ny Internet mety
Izay miezaka ny hanana fifandraisana vaovao, te hiresaka lohahevitra mahaliana, mahazo namana, mihaona ankizivavy, dia tokony hanandrana fomba tsotra sy mety amin'ny fiarahana amin'ny Internet - chat roulette. Ity loharano manokana ity dia manokatra fidirana amin'ireo mpampiasa Internet an-tapitrisany, toa anao liana amin'ny fifandraisana mahaliana, ny fitiavana ary ny finamanana. Ny safidin'ny interlocutor dia miseho tampoka, mety olona avy any Rosia, Belarus, Alemana, Etazonia ary na dia i Aostralia aza.
Ny resaka video miaraka amin'ny tovovavy dia ahafahan'ny lehilahy mampihatra ny fahaizany mifampiresaka amin'ny lahy sy ny vavy ary manao sipa erak'izao tontolo izao. Misy vintana lehibe tokoa fa ao anatin'ireto mpiresaka matetika ireto dia misy fanahy havana. Ny chat Roulette amin'ny zazavavy dia mpanampy azo itokisana amin'ny fitadiavana ny vadinao!
Ahoana ny fiasan'ny roulette chat video
Izay manana solosaina misy fakantsary fakan-tsary, mikrô ary mpandahateny dia afaka mahazo fifandraisana amin'ny Internet tsy misy fetra. Rehefa dinihina tokoa, io fitaovana io no ahafahana mandefa ilay sary an-tsary sy mitarika resaka.
Tsy ilaina ny mampiditra anarana, fa ny chat video dia manome safidy marobe amin'ireo mpampiasa voasoratra anarana noho ireo tsy fantatra anarana. Mba hampisehoana ny tenanao amin'ny hazavana tsara indrindra dia ampirisihina ianao hanoratra horonantsary fandraisana fohy fohy.
Amin'ny fipihana ny bokotra "Start Search" dia tonga mpikambana ao amin'ilay rafitra ianao. Sarin'ny mpifanerasera mety hiseho eo amin'ny varavarankely amin'ny chat video: mahita sy mandre olona ianao, mahita sy mandre anao izy. Raha toa tsy mahafinaritra anao na tsy mahaliana anao ny toetran'ny mpanelanelana dia tsindrio ny bokotra "Manaraka" ary mankanesa any amin'ny olona vaovao.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny chat video
Voalohany indrindra, ny chat video dia fitaovana hahitana olom-pantatra vaovao amin'ny fifandraisana mahafinaritra sy mora. Ny tanjon'ny fampiasana ny serivisinay ho an'ny olona manokana dia mety samy hafa.
Ny serivisintsika an-tserasera dia ahafahan'ny mpampiasa mamaha olana maromaro:
Fandresena ireo toerana sarotra. Ny saro-kenatra sy ny tsy fahampian'ny fahaiza-miresaka dia manasarotra ny fiainana. Ny resatsika amin'ny horonan-tsary dia manampy amin'ny fahazoana fahatokisan-tena, mianatra miditra mora foana amin'ny resaka iray, mitazona resaka amin'ny olon-tsy fantatra ary manadala mihitsy aza. Ny fahatsiarovan-tena amin'ny anarana tsy fantatra anarana, fisarahana amin'ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny efijery fanaraha-maso, ary koa ny fahaizana manelingelina ny resaka amin'ny fotoana rehetra dia manome fahatsapana filaminana ary mamela anao hahatsapa ho milamina sy malalaka kokoa.
Mitady mpivady. Ny chat Roulette miaraka amin'ny zazavavy dia manome anao fotoana ahafahana mamorona fifandraisana tsy misy anarana sy mahafinaritra amin'ny Internet, ary miankina aminao irery ihany ny fivoarany. Angamba hifankatia be ianao ka manapa-kevitra ny hiresaka amin'ny Internet. Ho an'ny maro dia lasa toerana fihaonana am-pitiavana marina ny resaka an-tsarinay.
Fanohanana ara-tsaina. Amin'ny fotoana sarotra, rehefa tsy misy olon-tiana eo akaiky eo, dia tsy mora ny miatrika ireo olana niavosa irery. Amin'ny tranga toy izany, na vahiny aza afaka mandatsaka ny fanahiny, ary ny fanampiana ara-moraly sy ny torohevitra tsara avy amin'ny olon-tsy fantatra dia mety tena ilaina.
Ahoana ny fomba hahitana namana vaovao amin'ny chat roulette
Mora ny mihaona, manana resaka, manomboka fifandraisana amin'ny resaka video. Aza tezitra rehefa manapaka ny resaka ny mpanelanelana voalohany: tsy azo atao ny mampifaly ny rehetra tanteraka. Ny chat video miaraka amin'ny tovovavy dia manome anao fotoana hifandraisana amin'ny olona an'arivony. Miezaha mijery sariaka, milamina, tsara fanahy, mahatsikaiky, mifantoka amin'ny mpiara-miasa, ary tena hahita olona tena liana aminao ianao.
Mahaiza mifankahalala, aza misalasala fa ianao no voalohany nifandray - ary olona vaovao mahaliana sy mahasoa no hiseho eo amin'ny fiainanao!
Ny horonan-tsary rosiana malaza indrindra!
Te hanana fahatsapana mamirapiratra sy fahafinaretana amin'ny fiarahana ve ianao? Faly tokoa izahay manolotra ny chat amin'ny horonan-tsary farany mendrika sy mendrika indrindra, natao mivantana hitadiavana olona mitovy hevitra sy handany fotoana amin'ny Internet. Ny manam-pahaizana manokana ato an-trano dia nanoratra endrika mahaliana: manana interface tsara sy azo ampiharina izy io. Fanamorana ny fitantanana - hamela anao handany fotoana be amin'ny docking tsy manelingelina miaraka amin'ny namanao na olom-pantatrao vaovao.
Isan-taona dia mitombo ny lazan'ny loharano noho ny fanomezana fitaovam-pifandraisana. Manaiky - mety izany, mazava ho azy fa azo idirana tanteraka hitondra tena tsara amin'ny olona rehetra, amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy miarina amin'ny toeram-piasana (solosaina) na solosaina finday. Marihina fa tsy ilaina ny fampiasam-bola lehibe. Toy ny fitsipika, ny fandoavam-bola dia alaina amin'ny fampiasana ny fanomezana serivisy serivisy, serivisy amin'ny chat video. Ny fandaniana minuscule dia tsy azo ampitahaina amin'ny dia lavitra amin'ny minibus.
Ny orinasanay dia efa namorona rindranasa VKontakte izay olona marobe no miresaka. Tena tsara ve ny mahita namana hifampiraharaha amin'ny alàlan'ny fanindriana ny lakilen'ny bera? Nanjary mora kokoa ny nitady satelita. Nanamora ny fomba fiasa - raha te hahita vady tsy miala ao amin'ny efitranonao ianao dia afaka manomboka izao miaraka amin'ny serivisy manokana. Ny "fizotra" iray manontolo dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny masoivohom-panambadiana toy izao, ary mivantana - amin'ny fampidirana azy. Isan'andro, ny mpampiasa amin'ny tranonkala manerantany dia mahazo ny fahafaha-mijery chat bebe kokoa, saingy tsy afaka mirehareha amin'ny fahitana mpihaino marobe na famoronana teknika. Ity chat video ity, ary bilaogy fifandraisana somary tsotra, ary resaka hafa misy lohahevitra.
Inona no dikan'ny chat video miaraka amin'ny namana tsy mahazatra? Tsy ny mpandalo mandalo fotsiny no hihaonanao, fa ny olona mitovy saina aminao ihany. Ary koa, ny serivisy toa izany dia omen'ny foto-kevitra: firesaka ho an'ireo mpamily fiara, izay mana-pahaizana manokana amin'ny lohahevitra ho an'ny tanora, forum ho an'ny zokiny sy ny antonony ary ny hafa.
Mahafantatra mahafinaritra amin'ny chat video Rosiana!
100% no henonao ireo fehezan-teny: "Nihaona tamina horonan-tsary izy ireo ary nanambady herintaona taty aoriana", na ohatra: "nihaona taminy ny sakaizany akaiky indrindra". Sendika be fitiavana sy be fitiavana no averina averina amin'ny alàlan'ny World Wide Web, na dia maro aza ny olona, ​​nanandrana nanangana fifandraisana tamin'ity fomba ity ary niaraka tamin'izay, rehefa tsy nahomby, dia manipy ity fikasana ity mandrakizay. Avy eo, aiza no manomboka ny fotoana firavoravoana vita amin'ny lojika sy tena mahomby amin'ny resaka video?
Alohan'ny hanombohanao dia te hiteny ianao fa ny laharam-pahamehana dia ny olona maharitra, satria misy ny ankamaroan'ny olona manao olom-pantatra amin'ny alàlan'ny chat roulette - saro-kenatra izy ireo, indraindray aza tsy matoky tena kely, mety tsy manana faniriana goavambe. Rehefa nieritreritra tsara ianao dia zava-dehibe ny handehananao amin'ity dingana ity, nefa tadidio fa hatramin'ny voalohany nanambarana ny fanambaranao - dia homena mari-pankasitrahana ianao miaraka amin'ireo marika voatanisa ireo. Firy ny olona - hevitra, faniriana ... Be tokoa, misy olona te-hihaona amin'ny olona miavaka toy izany? Aza kivy avy hatrany.
Mora be ny manapaka an'io stereotype io. Rehefa nandalo dingana sasany, ny fifanoratana rehetra dia manakaiky ny resaka momba ny fivorian'ny mpandray anjara. Raha io no resahina dia tokony ho avy aminao ny fandraisana andraikitra. Ampiasao ity hetsika ity - asehoy ny fahavonona sy ny fikirizana.
Zava-dehibe ny fahalalana ny fenitra: hadinoy ny fampiasana andianteny mifototra. Marina, ny faningana dia mety hahitana ireo tranga ireo rehefa nanapa-kevitra ny hampiasa azy ireo aloha ny mpanelanelana. Tsy maharary ny mampiavaka ny hafatrao tsy manam-paharoa sy mahaliana rehefa mifampiresaka.
Alao an-tsaina kely, mety hisy hiteny akory - manonofinofy tena fa tsy ilay mahita anao. Tsy mila manomboka census "banga" ary hiseho miboridana eo akaikin'ny fakantsary! Ilaina ny manatona ilay fanontaniana am-panajana, amin'ny fomba tsara. Miezaha mamorona eritreritra eritreritra, manoratra tsara. Rehefa dinihina tokoa, dia afaka mampitombo ny fahalianana anao izany.
Mieritreritra tsara - ny plus plus misy amin'ny fampiharana toy ny:
- Fahatsorana. Miezaha ho tso-po araka izay azo atao. Raha mifanao fotoana ianao dia mety ho diso fanantenana ny namanao raha manambaka ianao. Amin'ity tranga ity, ho very maina ny ezaka ...
Ny olona nahazo fahakiviana lehibe - vitsy izy ireo, saingy mihaona amin'ny fiainana andavanandro. Matetika ny adihevitra naroson'ireto olona ireto dia: "amin'ny Internet, hafa ny fomba nifandraisany tamiko ...". Raha tsy tianao ny manahirana anao toy ny verbiage toy izany - tso-po, angamba maotina kely, mazava ho azy fa tsy tokony handika ny lalànan'ny horonan-tsary Rosiana Videoruletka.in.ua ianao!
Manaova fanomezana tsara amin'ny fividianana vola madinika.
Vonona ny hanandrana fanomezana ve ianao? Midika izany fa nahita lohahevitra mety ianao amin'ny fialantsasatra iraisana ary tokony hividy faktiora anaty ianao amin'ny alàlan'ny fampiharana nomen'ny Badanga Ltd. Raha mila torohevitra ianao - ny rosiana amin'ny chat video Rosiana "Videoruletka" dia manolo-kevitra ny hampisondrotra ny fifandanjanao amin'ny alàlan'ny vola WebMoney, Qiwi, Yandex, ny karatra Banky rehetra. Etsy ambony, misy safidy mety arakaraka ny filaharana, satria vola madinika 10 (20 andro fifandraisana, raha miaraka amin'izay ianao manandrana tsy manome fanomezana avy amin'ny fo) amin'ny fampiasana ireo rafitra elektronika etsy ambony - $ 10. Ireo no fomba azo antoka indrindra, mahasoa indrindra, notsorina, izay tsy hisian'ny fanontaniana.
Ny fandoavana SMS, ny fandefasana dia mandeha amin'ny isa fohy mahazatra. Tsy mahasoa amin'ny ankapobeny ny famenoana ny fandanjana anatiny amin'ity dingana ity. Vola 4 monja ity ho an'ny mpanjifa. Miankina amin'ny mpandraharaha ihany koa. Ho an'ny $ 10, mety misy vola madinika folo, fenoina karatra banky. Ny ankamaroan'izy ireo dia mandoa vola toy izany noho ny hafainganam-pandehany sy amin'ny finday dia matetika no voaangona ny kaonty. "Videoruletka" dia nanao fanoharana iray, rehefa tapa-kevitra fa tsy mahasoa ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny isa kely, rehefa avy nandefa hafatra fohy - ny antsasaky ny vola - dia nesorin'ny mpandraharaha telecom. Ity ny tena olana amin'ny famenoana naseho tamin'ny 4 fa tsy kopecks folo amin'ny fandaniana lalina. Ho an'ny hakana faran'izay betsaka.
Ahoana no nahatonga ny chat video?
Hatramin'ny vanim-potoana nahaterahan'ny Internet, dia mandroso haingana ihany koa isika amin'ny fandrosoana ara-tsiansa sy ara-teknolojia eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ireo teknolojia vaovao momba ny solosaina. Betsaka no nanandrana namorona an'ity karazana fifanakalozan-kevitra ity izay mety hanampy hifanerasera amin'ny Internet, ny tsara kokoa aza dia ny mifankahita. Azafady mba mariho fa ny zava-drehetra dia mitranga amin'ny fotoana tena izy. Mazava ho azy, sambany nisy fisehoan-javatra niseho tamin'ny governemanta, tsy azo ampitahaina, voasokajy ny rindrambaiko toy izany; izy ireo dia nampiasaina tamin'ny fitsapana isan-karazany sy ny asa paramilitary an'ny fanjakana. haavo. Ilay "sariaka" voalohany dia teraka tamin'ny taona 1988, nantsoina hoe "Internet Relay Chat". Mazava ho azy fa nanjary nalaza teo noho eo ny zava-baovao teo amin'ny sehatra: ny "Hetsika Iraisam-pirenena". Io kofehy manavao io no fototry ny fananganana efitrano fifampiresahana an-tserasera.Izy io dia namorona manokana ny fototry ny fananganana chat video. Aorian'ny fanavaozana, fanatsarana ary fanatsarana ireo loharano miasa izay nosoratan'ireo mpamorona teknika, izay mpitsidika ny rindrambaiko farany dia afaka mifampiresaka amin'ny karazan-dresaka rehetra tsy misy ezaka.
Mandritra ny fampandrosoana ity rindrambaiko ity dia noforonina ireo karazana ankehitriny. Vokatry ny filàna sary «mivantana» dia nilaina ny famoronana fitaovana tsy mahazatra - fakan-tsary. Sambany io gadget io, na azonao atao aza ny mampitaha ilay "fitaovana", dia telo taona taorian'ny nisehoan'ny programa, izany hoe tamin'ny 1991 (ankehitriny, saika ny milina fisainana rehetra no misy an'io). Ny fanavaozana dia namela ny olona rehetra te-hamorona renirano anio ary hifandray amin'ireo olona mihaza na, ny mifanohitra amin'izany no mitady olona tsy fantatra nefa tsy miala ao an-trano. Izahay dia sahy manambara fa ireo mpampiasa chat video dia mankasitraka teknika kely toy ny webcam. Andao zaraintsika amin'ny webcam - misaotra!
Raha mieritreritra momba izany ianao, ny fifampiresahana horonantsary tena izy no mpitarika eo amin'ireo teboka fifanakalozana fampahalalana mitovy amin'izany amin'ny fandefasana teny. Azonao atao ny misaintsaina olona iray, maheno azy manana fahaizana manoratra, miteny, mahatsapa - mipetraka ao an-trano. Andao hojerentsika izao ny tombontsoa azo avy eo. Haja miharihary no mahita! Azonao atao ny misaintsaina ny mpanohitra anao. Rehefa eo amin'ny chat mahazatra ianao na amin'ny toerana mampiaraka malaza, raha tsara vintana ianao - faly ianao mahita sary (na sary, tsy anilihana izany) - mandinika eto ianao ary azonao antoka fa miaraka amin'izay azonao adika. Misy ohatra maro dia maro, heverinay fa tsy vaovao izany, rehefa maka sary an'ny olon-kafa ny mpitsidika, fa misy kosa ireo sary maodely kintana tsy fantatsika. Mazava ho azy fa sarotra ny manentana ny fihetsiky ny hafa, ny mahatakatra ny tena tanjona - ho antsika manokana dia tsy azo hazavaina izany,na izany aza, miharihary ny fahadisoam-panantenana amin'ny valin'ny foreplay miaraka amina mpifanerasera toy izany. Manaiky - eo am-pifandraisana dia efa hitanay ny mpitsidika, amin'ny loko isan-karazany araka izay tadiavinao, miorina amin'ny sarin'ny mombamomba ny besinimaro ... toetra, fomba ... Maharikoriko tokoa ny mahita rehefa avy eo fa tsy mitovy aminy ilay olona aseho amin'ny sary. Heveriko fa maharary kokoa ny miaritra ny tena zava-misy fa ny fieritreretana ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny olona iray, momba ny fifandraisana mahasoa samy hafa, dia ho hitanao ny miralenta ary tsy mifanohitra amin'ny anao izany! Andramo alaina sary an-tsaina ny toetoetran'ilay tantara angano manahirana azy, izay nahalala fa taorian'ny fifampidinihana lava niaraka tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandefasana data, dia niaina hafatra an-jatony ary fihetseham-po tsara niainana ... nahatsikaritra fa izy (izy ) safidy dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.Manaiky - eo am-pifandraisana dia efa hitanay ny mpitsidika, amin'ny loko isan-karazany araka izay tadiavinao, miorina amin'ny sarin'ny mombamomba ny besinimaro ... toetra, fomba ... Maharikoriko tokoa ny mahita rehefa avy eo fa tsy mitovy aminy ilay olona aseho amin'ny sary. Heveriko fa maharary kokoa ny miaritra ny tena zava-misy fa ny fieritreretana ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny olona iray, momba ny fifandraisana mahasoa samy hafa, dia ho hitanao ny miralenta ary tsy mifanohitra amin'ny anao izany! Andramo alaina sary an-tsaina ny toetoetran'ilay tantara angano manahirana azy, izay nahalala fa taorian'ny fifampidinihana lava niaraka tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandefasana data, dia niaina hafatra an-jatony ary fihetseham-po tsara niainana ... nahatsikaritra fa izy ) safidy dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.Manaiky - eo am-pifandraisana dia efa hitanay ny mpitsidika, amin'ny loko isan-karazany araka izay tadiavinao, miorina amin'ny sarin'ny mombamomba ny besinimaro ... toetra, fomba ... Maharikoriko tokoa ny mahita rehefa avy eo fa tsy mitovy aminy ilay olona aseho amin'ny sary. Heveriko fa maharary kokoa ny miaritra ny tena zava-misy fa ny fieritreretana ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny olona iray, momba ny fifandraisana mahasoa samy hafa, dia ho hitanao ny miralenta ary tsy mifanohitra amin'ny anao izany! Andramo alaina sary an-tsaina ny toetoetran'ilay tantara angano manahirana azy, izay nahalala fa taorian'ny fifampidinihana lava niaraka tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandefasana data, dia niaina hafatra an-jatony ary fihetseham-po tsara niainana ... nahatsikaritra fa izy (izy ) safidy dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.miantehitra amin'ny sarin'ny fampahalalana ampahibemaso ... toetra, fomba ... Maharikoriko kokoa ny mahita rehefa avy eo fa tsy mitovy amin'ilay olona aseho amin'ny sary izy. Heveriko fa maharary kokoa ny miaritra ny tena zava-misy fa ny fieritreretana ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny olona iray, momba ny fifandraisana mahasoa samy hafa, dia ho hitanao ny miralenta ary tsy mifanohitra amin'ny anao izany! Andramo alaina sary an-tsaina ny toetoetran'ilay tantara angano manahirana azy, izay nahalala fa taorian'ny fifampidinihana lava niaraka tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandefasana data, dia niaina hafatra an-jatony ary fihetseham-po tsara niainana ... nahatsikaritra fa izy (izy ) safidy dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.miantehitra amin'ny sarin'ny fampahalalana ampahibemaso ... toetra, fomba ... Maharikoriko kokoa ny mahita rehefa avy eo fa tsy mitovy amin'ilay olona aseho amin'ny sary izy. Heveriko fa maharary kokoa ny miaritra ny tena zava-misy fa ny fieritreretana ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny olona iray, momba ny fifandraisana mahasoa samy hafa, dia ho hitanao ny miralenta ary tsy mifanohitra amin'ny anao izany! Andramo alaina sary an-tsaina ny toetoetran'ilay tantara angano manahirana azy, izay nahalala fa taorian'ny fifampidinihana lava niaraka tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandefasana data, dia niaina hafatra an-jatony ary fihetseham-po tsara niainana ... nahatsikaritra fa izy ) safidy dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.Maharary kokoa ny miaritra ny zava-misy fa ny fieritreretana ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny olona iray, momba ny fifandraisana mahasoa samy hafa, dia ho hitanao ny miralenta ary tsy mifanohitra amin'ny anao izany! Andramo alaina sary an-tsaina ny toetoetran'ilay tantara angano manahirana azy, izay nahalala fa taorian'ny fifampidinihana lava niaraka tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandefasana data, dia niaina hafatra an-jatony ary fihetseham-po tsara niainana ... nahatsikaritra fa izy ) safidy dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.Maharary kokoa ny miaritra ny zava-misy fa ny fieritreretana ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny olona iray, momba ny fifandraisana mahasoa samy hafa, dia ho hitanao ny miralenta ary tsy mifanohitra amin'ny anao izany! Andramo alaina sary an-tsaina ny toetoetran'ilay tantara angano manahirana azy, izay nahalala fa taorian'ny fifampidinihana lava niaraka tamin'ny alàlan'ny fantsom-pandefasana data, dia niaina hafatra an-jatony ary fihetseham-po tsara niainana ... nahatsikaritra fa izy (izy ) safidy dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.hafatra an-jatony maro no niaina ary fihetseham-po tsara maro niainana ... nijery fa ny (safidiny) dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.hafatra an-jatony maro no niaina ary fihetseham-po tsara maro niainana ... nijery fa ny (safidiny) dia mpanafika ny lahy sy ny vavy. Tsy te ho ao anaty toe-javatra toy izany aho - tsy mazava izany.
Mijanòna! Amin'ny fampiasana Internet Videochat amin'ny fifandraisana, azonao atao ny misoroka mora foana ny fotoana tsy mahafinaritra toy izany. Toy ny amin'ny 5D - ny fifanoratana, ny fametrahana fifandraisana, ny olom-pantatra mamirapiratra - dia mitranga ao anaty atmosfera mafana akaiky ny zava-misy azo atao. Eo alohanao ny fitoviana ivelany, noho izany tsy misy na inona na inona mampiditra ati-doha efa zatra miasa saina ary mieritreritra zava-dratsy. Mihetsika am-pifaliana ianao, na dia matoky tanteraka aza, raha tsy amin'ny fitoviana ivelany, dia amin'ny fahatsoran'ny fikasan'ny namana na olom-pantatrao.
Horonan-tsary tsy tapaka ary ny fitsipiky ny fampiharana azy.
Raha hampiasa chat video dia mila ireto manaraka ireto:
- voalohany: solosaina finday manokana misy fidirana amin'ny tamba-jotra (hahazoana sary tsara kokoa sy fifampiresahana - raisina ny algorithm: "arakaraka ny maha avo ny hafainganana, ny mahaliana kokoa");